Home Wararka Waare: “Farmaajo abaabul ciiddan ayuu ku jiraa, doorasho diyaar uma ahan”
Waare: “Farmaajo abaabul ciiddan ayuu ku jiraa, doorasho diyaar uma ahan”
Madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle, Maxamed Cabdi waare ayaa ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo in uu ku howlan yahay abaabul ciiddan oo salka ku haya sidii uu dalka ugu xukumi lahaa awood milatari.
Madaxweyne hore Waare, ayaa wareysi uu siiyay Universal Tv ku sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay uu madaxweyne Farmaajo ku howlanaa arrimaha ciidamada, isagoo xusay inuu socdo qorshe gaar ah oo Farmaajo uu laleeyahay taliyayaashiisa ciiddamada.
Waare wuxuu sheegay qorshaha socda inuu kamid yahay, in ciidamada Eritrea ku maqan ee lasoo tababaray iyo ciidamo kale oo Itoobiya ka imaanaya loo adeegsado in lagu qabsado dalka.
“Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorasho ma rabo. In uusan doorasho rabin waxaad ku ogaanaysaa dhaqdhaqaaqyada hadda socda iyo taliyayaasha lala shirayo waxa laga damacsan yahay,” ayuu yiri madaxweyne hore Waare.
Madaxweynihii hore Hirshabeelle ayaa kamid ah siyaasiyiinta aadka ugasoo horjeeda siyaasada Farmaajo. Hadalkiisa wuxuu kusoo aaday xilli dalku marayo meel xasaasi ah oo la isku khilaafsan yahay xildhibaannada soo baxay, kuwaas oo qeyb yar oo kamid ah loo diiday in la siiyo shahaadada xildhibaanimo.
Previous articleQoor Qoor oo wali aan tanaasulin taageerida Farmaajo iyo Fahad! Qoraalna soo saaray
Next articleSomaliland ka hortimid hadalka Rooble sheegay ee ku saabsan 11ka Malyan
Somaliland oo bilaawday baaritaan lagu sameeynayo Dugsiga Abaarso & J. Barwaaqo
RW Armenia oo diiday inuu xilka iska casilo